भिडियो - Drishti Khabar
काठमाडौं / विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘यो मायाको डोरो’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा मेलिना राई र राजन तिमिल्सिनाको स्वर तथा संगीत रहेको छ । प्रज्योल राज शाक्यको निर्देशन रहेको गीतको अन्जु सुनार तथा सन्दिप सुवेदी फिचरिङ गरिएको छ । अखिल बास्तोला र टिमको छायाँकन रहेको गीतको भिडियोमा हिमसागर बमको सम्पादन छ । फरक शैलीका गीत मार्फत डा. उपाध्यायले विभिन...
गायक तथा संगीतकार किरण माइकल घिमीरेको ‘फेवा’
दृष्टि खबर काठमाण्डौ- गायक तथा संगीतकार किरण माइकल घिमीरेले ‘फेवा’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनीक गरेका छन् । फेवाताललगायतका पोखराका बिभिन्न रमणीय स्थलमा खिचिएको भिडियोमा छुल्ठिम गुरुङ र तीर्थ कोजु फिचर छन् । कीरण माइकलकै स्वर र संगीत रहेको गीत लेखनमा उनलाई सुदिप आत्रेयले सघाएका छन् । लक्ष्मण सुनारले निर्देशन गरेको भिडियो सौरभ लामाले खिचेका हुन् । आत्रेय प्रोडक्शनले निर्म...
दृष्टि खबर काठमाडौं- गायीका सरु गाैतम र गायक विनायक बसेलकाे स्वरमा रहकाे 'क्यारम तनी' बाेलकाे गीत सार्वजनिक भएकाे छ । सराेज गाैतमकाे प्रस्तुति रहेकाे गीतमा महानायक राजेश हमालकाे साथमा प्रतिमा कंडेल, उत्तम के. सी र नारायण बहादुर पाण्डेकाे अभिनय देख्न पाईन्छ । गीतकाे शब्द/संगीत भिम बि. सि., एरेन्ज पुष्कर सुनवार र मिक्सिङ/मास्टरिङ दिपकराज विश्वकर्माकाे रहेकाे छ । ...
सुमित्रा सत्यालको “बिर्से पापिलाई” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
दृष्टि खबर काभ्रेपलान्चोक - निकै आशा लाग्दो लोक दोहोरी गित “बिर्से पापिलाई” सार्वजनिक भएको छ । दुख पिडा सम्बन्धि रहेको लोक दोहोरि गित अहिलेको युवा पुस्तालाई मध्यानजर गदै बनाईएको गायिका सुमित्रा सत्यालले बताउनु भयो । “बिर्से पापिलाई” गितले निकै र्चचा पाउनेमा गायिका विश्वस्थ हुनुहुन्छ । गितमा स्वर गायिका सुमित्रा सत्याल र गायक राजु बिरही सापकोटाको रहेको छ । गायिका सुम...